Wararka - Khudaar Soy Ham sausage
Khudaar Soy Ham sausage
Isticmaalka borotiinka nudaha soybean, budada la safeeyey ee konjac, budada borotiinka, iyo saliidda khudradda sida alaabta ceeriin ee ugu muhiimsan, sifooyinka qaabdhismeedka qayb kasta ayaa loo isticmaalaa in lagu beddelo hilibka xayawaanka iyo tijaabinta farsamada farsamaynta hilibka khudradda iyo ham sausage.
formula aasaasiga ah
borotiinka nudaha soy 10, biyaha barafka 24, saliidda cuntada 7.5, konjac budada 1.2, borotiinka budada 3, istaarijka la beddelay 1.8, cusbo miiska 0.9, sonkorta cad 0.4, monosodium glutamate 0.14, I + G 0.1, khudaar dhadhan 0.15, whey protein 0.6. Budada suugo soy 0.6, midabka karamell 0.09, TBHQ 0.03.
Barootiinka nudaha soybean → ku dar biyo si aad fuuq bax → fuuqbax → xariir → qabow → kaydso
Ku dar walxaha caawimada ah biyaha barafka → walaaq oo emulsify → ku dar borotiinka nudaha soy → walaaqaya xawli sare → enema → karinsho
1. Fuuq-celinta: ku dar biyo si ay borotiinka soy-ku u nuugaan biyaha oo ay qoyaan, oo ay fuuq-celiyaan.Inta lagu jiro wakhtigan kicinta gacanku waxay soo gaabin kartaa wakhtiga fuuq-celinta.
2. Fuuqbaxa: fuuq-celinta ka dib, borotiinka nudaha soybean-ka waxa lagu fuuq-baxayaa mishiin gaar ah oo fuuqbaxa, waxaana la hayn karaa oo keliya biyaha xidha ee saxda ah.Biyaha guud ahaan la kantaroolo waa inta u dhaxaysa 20% iyo 23%.Heerkulka borotiinka soybean ka dib fuuqbaxa guud ahaan kama badna 25 ° C, taas oo lagu go'aamiyo heerkulka biyaha ee loo isticmaalo fuuq-celinta.
3. Xariijimo: Qaybaha borotiinka soybean-ka fuuqbaxay waxa lagu maroojiyay fiilooyinka fiber-ka iyadoo uu adeegsanayo mishiinka qallooca hilibka khudradda;waxaa loo baahan yahay in lagu qaboojiyo heerkulka qolka wakhtiga si looga fogaado urta iyo xumaanshaha borotiinka heerkulka sare, taas oo si xun u saameyn doonta tayada alaabta dhamaadka.
4. Isku qas: Isku qas walxaha caawiya sida budada konjac, emulsifier, iwm. iyo saliid khudradeed oo ku jira biyaha barafka, oo ku koobi walaaq dhexdhexaad ah.Ka dib markaad si siman u ekaato, ku rid xariirta borotiinka soybean ka oo ku walaaq xawaare sare 15min ～ 20min.
5. Enema: Dooro daboolka saxda ah oo ku rid mishiinka enema, enema buuxinta viscous isku qasan iyadoo la raacayo tilmaamaha loo dejiyay.
6. Karinta (sterilization): Ku kari hamka at 98 ℃ ilaa 25min, ku haboon kaydinta qaboojiyaha.Waxa lagu jeermi karaa at 135 ℃ ilaa 10min waxaana lagu kaydin karaa heerkulka qolka.Tilmaamaha alaabta kor ku xusan waa 45g ~ 50g / strip, miisaanka alaabta ayaa kordha, waqtiga karinta waa in la kordhiyaa.
7. Tijaabinta: Kormeerka nadaafadda ayaa ah shaqo aan laga maarmi karin si badeecaduhu u noqdaan kuwo u qalma iyo si loo hubiyo noloshooda shelf.Waxyaabaha la tijaabinayo guud ahaan waxaa ka mid ah qoyaanka iyo tirada unugyada bakteeriyada.Tirada dhulalka badeecaduhu waa inay ka hooseeyaan 30 / g.Bakteeriyada pathogenic waa in aan la ogaan.
Waqtiga boostada: Nov-28-2020
Khadka Soo saarista Baasto Cusub Khadka waxsoosaarka qashinka barafaysan Khadka Waxsoosaarka Cuntada Eeyga Khadka Wax soo saarka Raashinka Raashinka Raashinka ah Khadka Waxsoosaarka Raashinka Xoolaha Pizza Cajiinka Mixer Machine